ပါဝါ:22KW + 0.75KW + 1.5KW အဆင့်သုံးဆင့်
စွမ်းရည်:400~ 500kg / h
Extrusion အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာဟာခေတ်မှီသောငါးများထုတ်လုပ်မှုတွင်အဓိကအရေးပါသည်. မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရေငန်အစာကျွေးရန်အတွက် extruded အစားအစာများကိုပုံမှန်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်. extrusion အားဖြင့်ရေနေအစားအစာသာလွန်ရေတည်ငြိမ်မှုရှိသည်, ပိုကောင်းသောရေပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် pelleted အစားအစာထက်ပိုမိုမြင့်မားစွမ်းအင်, ၎င်းသည်ငါးကြီးထွားမှုနှင့်အစာကျွေးခြင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်. ထို့ကြောင့်သမားရိုးကျ pelleting ဖြစ်စဉ်ကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, extrusion နည်းပညာသည်ရေနေအစာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်.
Extruder နှင့် Expander
Extruder နှင့်ချဲ့စက်များသည်အဓိကအားဖြင့်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင် extrusion နှင့်ချဲ့ထွင်ခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသောငါးအစာစက်များဖြစ်သည်. ငါးအစာကျွေးသောစက်သည်ဇီဝဓာတ်ပေါင်းဖိုဖြစ်သည်. အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုမှတဆင့်, ဖိအား, နှင့်စည်အတွင်းညှပ်, ဒါကြောင့်သေအဖွင့်၏ Cross- အပိုင်းပုံသဏ္assာန်မတိုင်မီကုန်ကြမ်းအတင်းအကျပ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. Extrusion ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဓိကအားဖြင့် power transmission device ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, အစာကျွေးကိရိယာ, လေအေးပေးစက်, ရေပေါ်ငါးအစာကျည် machinebarrel နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း device ကိုဆေးရုံကဆင်း, စသည်တို့. extruder ၏စည်ကိုစည်ခေါင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, ဝက် auger, စီးဆင်းမှုကန့်သတ် (shearlocks တောင်းဆိုခဲ့သည်) နှင့် Cross- အပိုင်းသေဆုံးသည်.
ချဲ့စက် extruders ဆင်တူသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် applications များခြားနားချက်ရှိသည်. ချဲ့ထွင်ရန်ခဲယဉ်းသောပစ္စည်းများဆေးကြောရန်အတွက်စက်များအသုံးပြုလေ့ရှိသည်, အစာအာဟာရပြည့်ဝစေရန်အလို့ငှာ cellulose နှင့် protein အစိတ်အပိုင်းများကိုအစာကြေလွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်. Extruders များသည်ဗူးတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်။ သေ။ တွန်းပို့သည်. ဆေးကြောခြင်းကိုမြင့်မားသောညှပ်ကုသမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်. တိုးချဲ့ကုသမှုစဉ်အတွင်းညှပ်အရေးယူမှုအများကြီးလျော့နည်းသည်. တစ် ဦး extruder နှင့်နှိုင်းယှဉ်, ချဲ့စက်၏ရိုးရှင်းခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်အမြောက်အများကိုထိရောက်စွာကုသနိုင်သည်. ရေပေါ်ငါးအစာစက်သည်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ role မှပါဝင်သည်. extruder သည်, စျေးကွက်အတွင်းရရှိနိုင်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုတည်းဝက်အူ extruders အဖြစ်, အမွှာဝက်အူ extruders, စိုစွတ်သောငါးအစာကျွေးခြင်းစက်, ခြောက်သွေ့သောငါးအစာကျွေးခြင်းစက်နှင့်စသည်တို့.
ခြောက်သွေ့သောရေပေါ်ငါးအစာစက်သည်အပူ (သို့) ရေနွေးငွေ့သွင်းခြင်း (သို့) အကျီအပူအတွက်ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာမလိုသောစက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်, အားလုံးထုတ်ကုန်အပူစက်မှုပွတ်တိုက်အားအင်အားဖြင့်ပြည့်စုံသည်. ကြိုတင်စည်းကမ်းချက်များကိုအသုံးမပြုဘဲ, ခြောက်သွေ့သော extrusion အနိမ့်အစိုဓာတ်ကိုအဆင့်ဆင့် employ. ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အစိုဓာတ်နည်းပြီးအဆီမြင့်မားသောအစာကျွေးပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်သင့်တော်သည်.
စိုစွတ်သောအမျိုးအစားရှိသောရေပေါ်ငါးအစာစက်သည်ရှုပ်ထွေးသည့်စက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလေအေးပေးစက်နှင့် / သို့မဟုတ် extruder စည်ထဲသို့ရေသို့မဟုတ်ရေငွေ့သွင်းခြင်းအတွက်တိကျသောမီတာစနစ်များရှိသည်။. ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခြင်းသည်ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်ရန်စိုစွတ်သော extrusion လုပ်ငန်းစဉ်၌အလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်. ရေပေါ်ငါးအစာစက်၏အလုပ်လုပ်ပုံသည်အဓိကဖြစ်သည်: ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း, ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ပုံဖော်သေ. အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဖိအားပေးမှုဖြစ်စဉ်များသည်ဆော်လမုန်းရောဂါနှင့်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုများကိုသေစေနိုင်သည်.
Extruded Aqua-feed Pellet ရဲ့အားသာချက်များ
extruder တစ်ခု၏စွမ်းရည်သည်ပုစွန်မွေးမြူရေးအတွက်ငါးအစာတောင့်များထုတ်လုပ်ရန်အစာထုတ်လုပ်သူရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးပါတယ်, ဂဏန်း, ငါးရှဉ့်, ငါးခူ, ငါးကြင်း, ဖားများနှင့်စသည်တို့.
feed ပစ္စည်း HTST ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြတ်သန်းသွားသည်, ဓာတ် gelatinization ဒီဂရီတိုးရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 80-99% ရေနေတိရိစ္ဆာန်များသည်အလွယ်တကူအစာကြေ.
တောင့်သည်ငါး၏အစာအိမ်တွင်အစာအာဟာရဓာတ်များဆုံးရှုံးသည် (စည်စဉ်အတွင်း), အရာပိုကောင်းအာဟာရစုပ်ယူရန်အထောက်အကူပြုရန်.
ထုတ်ယူစဉ်အတွင်း Extrusion အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကိုကျယ်ပြန့်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်, သောနောက်ဆုံးအစာကျွေးခြင်း၏ရေတည်ငြိမ်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးသည်. ဤအတောင့်သည်ရေပိုမိုစုပ်ယူသည်, အချိန်ကြာရှည်စွာပုံသဏ္ာန်ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးအာဟာရဓာတ်များလျော့နည်းစေသည်. ၎င်းသည်တောင့်တင်းသောနည်းပညာအရည်အသွေးနှင့်ငါး၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုသည်.
extruder တစ်ခုသည် floating feed လုပ်ရန်လုံးဝဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်, အစာကျွေးခြင်းနှင့်သိပ်သည်းဆထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်နှေးကွေးနစ်မြုပ် feed ကို; ၎င်းသည်မတူကွဲပြားသောငါးမျိုးစိတ်များကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုသည်.
Floating Fish Feed Machine ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ